NFL "အကောင်းဆုံးအားထုတ်မှု" Plays (အပိုင်း ၁)
နောက်ထပ် NFL ဗီဒီယိုများအတွက်ချန်နယ်စာရင်းသွင်းရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ တစ်ပတ်မှာဗီဒီယိုအနည်းငယ်တင်ထားတယ် ကျွန်ုပ်၏ twitter @FootballFilmsYT ကိုလည်းလိုက်နာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်ကိုရွေးချယ်ပါကကြွေးကြော်ရန်ဗီဒီယိုအကြံဥာဏ်များကိုမှတ်ချက်ပေးပါ။
ဒုတိယရုပ်သံ - https://www.youtube.com/channel/UCNDSelDymO8RqlB5cbGz0iQ? = စာရင်းပေးသွင်းထားသူ
NFL သမိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံး Hits (ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုများတဦး): https://www.youtube.com / စောင့်ကြည့်? v = TpbYyG2X0r8 & t = 35s
အားလုံးညာဘက် #NFL, CBS, Fox, ESPN, NBC ကိုသွား & ကရဲ့ထုတ်လွှင့်။ ငါသူတို့ကလစ်များမပိုင်ပါဘူး။ ငါသူတို့ကလစ်များယူသူတို့နှင့်အတူစုဆောင်းပါစေ။ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုမရည်ရွယ်ပါ။ ငါဒီငွေကိုမရှာပါနဲ့၊ ဒါကဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပါ။
ကျွန်ုပ် youtube နှင့် NFL GamePass မှဂိမ်းများကိုကြည့်ခြင်း၊ ထို့နောက်ဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်။ Filmora9 သို့စုစည်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ thumbnails များကို Polarr ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာတွင်ပြုလုပ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်ကိုတွစ်တာတွင်ပို့ပေးပါ
NFL အကောင်းဆုံး "လူသား" ကစားသည်
အသင်းအားလုံး၏ ၂၀၂၀ ရာသီ၏ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုကစားခြင်း
အားကစားသမိုင်း၌အကျော်ကြားဆုံး "GENUIS" ခဏ
NBA "Dirtiest" စျေးပေါသောရိုက်ချက်များ
NFL "အကောင်းဆုံးအားထုတ်မှု" Plays (အပိုင်း ၂)
အားလုံးအချိန်၏ Nastiest ဘောလုံး Jukes
NFL အကောင်းဆုံး "Get Off ငါ့ကို" ကစားနည်းများ (အပိုင်း ၁)
NFL "အားလုံးအချည်းနှီးအဘို့?" ခဏ || HD
NBA "မဖြစ်နိုင်ဆုံး" အချိန်လေး
NFL | အဆိုပါ 2019-20 ရာသီမှအကောင်းဆုံးကစား
2020 NFL ရာသီ၏ Touchdown
NBA "ဘာဖြစ်တာလဲ?!" ခဏတာ
NFL "ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလား" ခဏ (အပိုင်း ၁)
NFL "အားလုံးအချည်းနှီးအဘို့?" ခဏ || HD အပိုင်း 2
NFL သမိုင်းတွင်ထိပ်ဆုံး 100 ပြေးသည်!
NFL VIRAL အင်တာနက်ပြိုကွဲကြောင်းပြဇာတ်များ (၂၀၂၀)
NFL အကြီးမားဆုံး "Knockout Hits"